raha ny fanazavan’ny tomponandraikitra amina sekoly tsy miankina iray eny Ambohimanarina. Tsy misy ny asa ka noho izany dia tsy misy ny ho raisina, ny ray aman-drenin’ny mpianatra tsy mandoa saram-pianarana satria ny zanany ary tsy mbola mianatra. Aleon’ireo ray aman-dreny hanaovana tahiry aloha ny saram-pianarana. Saika miatrika izany olana izany avokoa, raha ny fanazavana, ny ankamaroan’ireo sekoly tsy miankina, raha tsy hiresaka afa-tsy ny eto Antananarivo fotsiny, hoy ny fanazavana. Misy amin’ireo mpampianatra sy mpanabe no efa ho 5 volana izao no tsy nandray karama vokatry ny hahamehana ara-pahasalamana. Mitaraina amin’ny fitondram-panjakana noho izany izy ireo mba hijery izay azo atao hanavotana izay fanabeazana eny amin’ny sehatra tsy miankina izay.